Ny tempolin'i Angkor, gaga any Kambôdza | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Kambodza, Inona no ho hita
Iray amin'ireo manintona mpizahatany malaza indrindra ao Kambodza ny tempolin'i angkor, vato vato saika natelin'ny ala mando, tsy lavitra ny tanànan'i Siem Reap ankehitriny.
Betsaka no mihomehy momba ny morontsiraka sy ny helodranon'i Thailand fa ireo no tena marina tempoly any Kambodia Mahavariana izy ireo, ary raha tianao ny tantara sy ny arkeolojia, dia tsy misy toeran-kaleha tsara kokoa eto amin'ity faritra ity.
2 Tsidiho ny tempolin'i Angkor
Angkor dia teny avy amin'ny Sanskrit, fiteny any India taloha izay 3 500 taona farafaharatsiny. Androany dia fiteny litorzikan'ny Hindoisma izy io ary matetika koa dia hita ao amin'ny lahatsoratra bodista.
Ny tanànan'i Angkor dia renivohitry ny Empira Khmer taloha izany dia niroborobo teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ary tanàna iray be mponina izy tamin'ny fotoana iray. Ao anaty ala mando sy tropikaly izy io, akaikin'ny tanànan'i Siem Reap, any amin'ny faritany mitovy anarana aminy. Isaina tempoly an'arivonyTsy vitsy izy ireo, ary manaitra ny mahita azy ireo mipoitra avy eny amin'ny kijana maitso sy tanimbary.
Ny arkeolojia maoderina dia namonjy ny maro tamin'ny fanjavonany satria tany amin'ny toerana mando be sy feno zavamaniry be dia be, ny fandehan'ny fotoana dia nandany azy ireo teo amin'ireo rantsana, faka ary ravina. Etsy ankilany, napetraky ny UNESCO ny rava, na Angkor Wat na Angkor Thom, ho eo ambany fiarovany. Lova manerantany.
Folo taona mahery lasa izay ary niaraka tamin'ny fanampian'ny sary zanabolana dia hita izany Angkor no tanàna talohan'ny indostria lehibe indrindra manerantany, miaraka amin'ny tempoly sy ny faritra an-tanàn-dehibe manodidina, miaraka amin'ny tamba-jotra ho an'ny mponina ary manondraka ny tany amin'ny faritra iray izay ny monsoons no filaminan'ny andro.
Toa ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia tsy mbola nilaozana tanteraka i Angkor Wat, araka ny nambaran'ny mpikaroka portogey na ny toeram-ponenan'ny Japoney tao amin'ilay faritra, ary na dia tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia efa fantatry ny mponina eo an-toerana ny rava ary naseho tamin'ny Eoropeana vitsivitsy . iza no tao. Ary nahavariana azy ireo izany ny asa fanarenana dia natomboka tamin'ny fiandohan'ny faha-XNUMX mifanome tanana amina vondron'olona frantsay.
Nitohy nandritra ny am-polony taona maro ny asa ary tetikasa goavana izany, noho izany vao nifarana tamin'ny faran'ny taona 1993 izy ireo. Fantatrao ve fa nisy tempoly sasany noravana vato sy natsangana tamin'ny fototra simenitra, ohatra? Mendri-piderana ny vokatra ary izany no antony tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nitombo be ny mpizahatany ary nanomboka nipoitra ny manodidina ny hotely sy trano fisakafoanana.
Tombanana ho any mpizahatany roa tapitrisa isan-taona Ary betsaka izany ho an'ny tranokala Angkor taloha. Mampalahelo fa mbola tsy voavaha ny olana.
Tsidiho ny tempolin'i Angkor
Tokony ho fantatrao aloha fa tsy maintsy mividy pass ianao, ny Angkor Pass, hitsidika ireo tempoly ao amin'ny Park Park Archaeological Angkor. Azonao atao ny mividy azy eo am-baravarana lehibe na amin'ny lalana mankany Angkor Wat. Misy mandalo iray andro, telo andro ary fito andro. Ampiasaina amin'ny andro misesy izy ireo.
Ilay tranokala sokafy manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 6 hariva Saingy ny toerana sasany dia samy manana ny fotoanan'ny famaranana azy, ka mora kokoa ny hahafantatra mialoha izay tempoly izay tsy tianao halaina ary hahafantatra ny ora anaovany azy alohan'ny hanombohany. Na dia ny toerana sasany dia manana tapakila misaraka, toa an'i Beng Melea na Phnom Kulen.
Amin'ny ankapobeny dia ny fitsidihana izany Angkor Wat, Angkor Thom, Bakong, Baksei Chamkrong, Banteay Samre, Temple Bayon, Preah Ko, Terrace of the Elephants, ary Phnom Kulen, mba hanonona toerana vitsivitsy fotsiny. Malalaka ny faritra, an'ny kilometatra sy kilometatra, ary maro izany fitoerana masina mihoatra ny tempoly fotsiny.
Angkor Wat Mahafinaritra izy io ary maro no mihevitra fa eo an-tampon'ny Piramidan'i Egypt izy io. Any amin'ny enina kilometatra avaratry ny tanànan'ny Siem Reap no misy azy ary atsimon'ny Angkor Thom. Amin'ny vavahady andrefana ihany no azonao idirana.
Izy io dia natsangana tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-XNUMX ary tombanana fa naharitra telopolo taona ny asa. A tempoly natokana ho an'i Vishnu andriamanitra y Izy no tempoly lehibe indrindra ao amin'ny sarotra sy voatahiry tsara indrindra. Inoana fa tempolin'ny fandevenana an'ny Mpanjaka Suryavarman III izy io, ary a replika kely habe an'izao rehetra izao izay ny tilikambo afovoany dia maneho ny tendrombohitra angano Meru, eo afovoan'ny cosmos. Goavana izy io ary very ao amin'ny efitranony, ny galeria, ny tsanganana, ny patio ary ny portico-ny ianao.
Angkor Thom izy no renivohitra farany tamin'ny Fanjakana Khmer. Iray izany tanàna mimanda toerana nipetrahan'ny manamboninahitra, tompon'andraikitra ary moanina. Ny vita tamin'ny hazo dia resin'ny fotoana fohy fa ny tsangambato vato dia mijanona: eo amin'ireo tempoly ao anatin'ny rindriny ireo Terrace of the Elephants, Bayon, ny terrasin'i King Leper na Tep Pranam, ohatra. Eo koa ny lapan'ny mpanjaka.
I Bayon dia eo afovoany, 1500 metatra miala ny fidirana atsimo. Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary ankehitriny dia voahodidin'ny ala mikitroka. Izy io dia natsangana zato taona taorian'ny Angkor Wat. Ny tilikambo dia manana endrika roa arivo voasokitra amin'ny vato, mitsiky kely. Tsy manana rindrina manodidina azy izy io ary misy ambaratonga tsotra telo. Ao Angkor Thom ihany koa no misy ny Terrace of the Elephants, miaraka amin'ireo sarivongana biby baikon'ny andriana sy mpanompo.
Raha mitsidika an'i Angkor Thom miditra amin'ny vavahady atsimo ianao dia afaka mijanona sy mihaona eny an-dalana Baksei Chamkrong. Ny maritrano sy ny haingon'ity tempoly kely ity dia tsara tarehy ary azo ankafizina rehefa mandehandeha manodidina azy ianao. Azonao atao ny miakatra amin'ny Central Sanctuary amin'ny alàlan'ny tohatra avaratra izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Banteay Samre.
Tempoly iray eo amin'ny 400 metatra atsinanan'ny Baray izy ary tsara indrindra ny miditra avy any atsinanana. Nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX ary natokana ho an'i Vishnu. Io no iray amin'ireo complexe feno indrindra ao Angkor ary efa tafaverina amin'ny laoniny tsara na dia tsy misy fikojakojana kely aza.
Preah Ko Any Roluos, eo anelanelan'i Lolei sy Bakong io. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary natokana ho an'i Siva. Izy io dia tempolin'ny fandevenana ho an'ny ray aman-drenin'ny Mpanjaka Indravarman I, miaraka amina drafitra toradroa misy rindrina sy tilikambo. Araka ny hitanao dia afaka manohy manonona anarana ireo tempoly aho satria goavana be ity. Noho izany, iza no mahatalanjona ary raha ny fahitako azy dia mendrika asa taloha alohan'ny hitsena azy, raha tsy izany dia mety hahita zavatra tsy mahafinaritra ianao.
Misoratra anarana amin'ny fitsidihana? Angamba tsy hevitra ratsy. Ny tempoly tsirairay dia manokana fa mety hoe rehefa afaka kelikely dia toa mitovy aminao daholo izy ireo, toy ny mitranga rehefa mitsidika trano mimanda, tranombakoka na fiangonana ianao, koa manaova fikarohana alohan'ny handehananao ary soraty ireo tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Ny tempolin'i Angkor, gaga any Kambôdza
Fetiben'ny hazavana ao Boimorto